1 Samoela 16 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 16
Ny nanosorana an'i Davida ho mpanjaka, sy niantsoana azy ho any amin'i Saola.
1Ka hoy Iaveh tamin'i Samoela: Mandra-pahoviana no hitomanianao an'i Saola, kanefa aho manary azy tsy ho mpanjaka amin'Israely intsony? Fenoy diloilo ny tandrokao, dia mandehana fa irahiko ho amin'Isaï any Betleema hianao, satria amin'ny zanany no nahitako ilay mpanjaka tiako. 2Dia hoy Samoela: Hataoko ahoana no fankàny? Ho ren'i Saola izany dia hataony maty aho? Ary hoy Iaveh: Mitondrà vantotr'ombivavy, ka ataovy hoe: Hanatitra sorona ho an'ny Tompo no nankanesako taty. 3Ary asao Isaï amin'ny sorona, fa hampahafantariko anao izay tokony hataonao, dia hohosoranao ho ahy izay hotondroiko aminao. 4Dia nataon'i Samoela izay nandidian'ny Tompo azy, ka nankany Betleema izy. Tonga nitsena azy ny loholon'ny tanàna tamin'ahiahy ka nanao hoe: Hampiadana va no nahatongavanao? 5Dia hoy Samoela: Hampiadana! Tonga hanatitra sorona ho an'ny Tompo aho. Ka hamasino ny tenanareo, ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny sorona. Dia nanamasina an'Isaï sy ny zanany izy, sy nanasa azy ireo ho any amin'ny sorona.
6Nony tafiditra izy ireo dia nahita an'i Eliaba Samoela ka nanao hoe: Mby eto anatrehany tokoa ilay voahosotry ny Tompo. 7Fa hoy Iaveh tamin'i Samoela: Aza ny tarehiny no jerenao, na ny hahavon'ny tsanganany, fa efa natanilako io. Tsy mba izay hitan'ny olombelona no izy; ny olombelona mijery ny tarehy fa Iaveh kosa mijery ny fo. 8Dia Abinadaba indray no nantsoin'Isaï, ka nampandaloviny teo anatrehan'i Samoela fa hoy Samoela: Ity koa tsy mba nofidin'ny Tompo. 9Dia Samà indray no nampandalovin'Isaï, fa hoy Samoela: Tsy mbola ilay voafidin'ny Tompo koa ity. 10Nampandalovin'Isaï teo anatrehan'i Samoela koa ireto fito mirahalahy tamin'ny zanany ary hoy Samoela tamin'Isaï : Tsy misy nofidin'ny Tompo amin'ireto. 11Ary hoy Samoela tamin'Isaï: Ireo ihany va no zatovolahy rehetra? Dia hoy Isaï: Mbola misy ilay faralahy, ka indro fa miandry ondry izy. Ka hoy Samoela tamin'Isaï: Ampanalao izy, fa tsy hipetraka hihinana isika raha tsy efa tonga izy. 12Dia nampanalain'Isaï io. Mavo mena ny volon'izy izay; sady bary maso izy no tsara tarehy. Ary hoy Iaveh: Mitsangàna, hosory io, fa io no izy. 13Dia noraisin'i Samoela ny tandroka nisy diloilo, ka nohosorany teo afovoan'ny rahalahiny io; ary hatramin'izany andro izany sy tamin'ny andro manaraka, dia nidina tamin'i Davida ny fanahin'ny Tompo
Dia niainga Samoela nankany Ramata.
14Ary niala tamin'i Saola ny Fanahin'ny Tompo, fa nisy fanahy ratsy avy amin'ny Tompo nalatsany tamin'i Saola. 15Ka hoy ny mpanompon'i Saola taminy: Indro misy fanahy ratsy avy amin'ny Tompo, milatsaka aminao. 16Aoka hiteny ny tomponay, dia indreto ny mpanomponao manoloana anao dia hitady olona mahay mitendry harpa; ary rahefa tonga aminao ny fanahy ratsy avy amin'ny Tompo, dia hitendry amin'ny tànany izy; ka hionona hianao. 17Dia hoy ny navalin'i Saola tamin'ny mpanompony: Itadiavo olona mahay zava-maneno tsara àry aho, ka ento mankaty amiko. 18Ary niteny ny iray tamin'ny mpanompony nanao hoe: Hitako ny iray amin'ny zanak'Isaï ao Betleema, mahay mitendry harpa; lehilahy matanjaka sy mahery an'ady, mahay miteny, tsara tarehy, ary omban'ny Tompo. 19Dia nandefa iraka nankany amin'Isaï Saola hilaza aminy hoe: Alefaso hankaty amiko Davida zanakao, izay miandry ondry. 20Koa naka ampondra anankiray Isaï, mambin'ny mofo sy ny divay iray siny hoditra ary zanak'osy iray, ka nampitondrainy an'i Davida zanany ireo ho an'i Saola. 21Nony tonga tany amin'i Saola Davida dia nitsangana teo anatrehany, dia raiki-pitia azy Saola ary nataony mpitondra fiadiany izy. 22Ary Saola naniraka olona hilaza amin'Isaï hoe: Aoka Davida mba hitoetra eto anatrehako, fa nahita fitia teo imasoko izy! 23Nony injay tonga amin'i Saola ny fanahy avy amin'Andriamanitra, raisin'i Davida ny harpa, ka tendreny amin'ny tànany dia mionona Saola sy finaritra, ary miala aminy ny fanahy ratsy. >